Home Wararka Farmaajo oo Amray in Ahlusunna la Siiyo Kaliya oo 12-Xildhibaan (Aqriso)
Farmaajo oo Amray in Ahlusunna la Siiyo Kaliya oo 12-Xildhibaan (Aqriso)
Warar hoose oo ay heshay MUQDISHO ONLINE ayaa waxaa ay sheegayaan in la diyaariyay qoondada la siinaayo Maamulka Ahlusnna Waljameeca ee gobolada dhexe,gaar ahaan saamiga ay ka helayaan Dhismaha Maamulka Cusub ee Gal-mudug.
Sida aan wararka ku heleeyno Ra’iisul Wasaaraha Xukumada Federaalka ah Ee Soomaaliya Xassan Cali Kheeyre ayaa horay u diiday in wax Xildhibaano ah la siiyo Ahlusunna islamarkaana dagaal looga saaro dhulka ay ka joogaan gobolka Gal-gaduud taasi oo talaabooyin horay loo qaaday run ahaanshiyaheeda xaqiijineeyso.
Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa waxaa uu soo jeediyay in 12-Xildhibaan oo kaliya la siiyo Maamulka Ahlusunna taasi oo cadeeyneeysa in ay si cad Dowladu uga baxday heshiiskii ay la gashay Culumada.
Dhismaha Gal-mudugta cusub ayaa waxaa ay dhalisay in lasii kala fogaado islamarkaana colaado horleh ay ka dhacaan gobolka,waxaana u wacan heshiisyadii la galay oo dowladu ka baxday.
Maamulka Ahlusunna ayaana ku qancin Xildhibaanada la siiyay ee waliba lagu amray in ay ku saleeyaan Qabaa’ilka,waxaana suuragal ah in Maamlmaha soo socda ay soo saaraan War ay ku caddeeynayaan go’aankooda.